China Hemodialysis Solution Kugadzira Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Iyo Hemodialysis yekuzadza tambo inotora yekumberi tekinoroji yeGerman uye yakanyatsogadzirirwa dialysate kuzadza. Chikamu chemuchina uyu chinogona kuzadzwa nepombi yeparistaltic kana pombi inesimbi isina sirinji ye316L. Iyo inodzorwa ne PLC, ine yakanyanya kuzadza kurongeka uye nyore kugadzirisa kweiyo yekuzadza renji. Muchina uyu unonzwisisika dhizaini, yakatsiga uye yakavimbika mashandiro, nyore mashandiro uye kugadzirisa, uye inonyatso kusangana nezvinodiwa neGMP.
Hemodialysis Solution Kugadzira Line Nhanganyaya:
YeHemodialysis dhiramu yekuwachisa yekuzadza capping.
Hemodialysis Solution Kugadzira Line Maitiro
Hemodialysis yekuzadza tambo
Yakanyanya kunyatsoita: teedzera huremu yekuzadza system (METTLER TOLEDO inorema sensor), wedzera iko kuzadza kunyatso. Yakakosha diki bhora irikupa, ita bhodhoro richimhanya mushe pane conveyor.
Yekukurumidza-inononoka kuzadza vharuvhu, vimbisa nekukurumidza kuzadza mune yekutanga nhanho kuchengetedza nguva yekuzadza, uye kunonoka kuzadza mune yekupedzisira nhanho kuwedzera kuzadza kunyatso. Mota yepamusoro-pasi yekuzadza, inoderedza inopupuma ichizadza.
Yakakwidzwa kuunganidza tireyi pasi pekuzadza kamwene kana paine kudonha kubva pamubhu. Pombi yedu ine basa rakavharwa / kuvhara kusimbisa muromo wemuromo, kuvimbisa kuti hapana kubvarura kubata kune bhodhoro kunze.
Muchina wese unodzorwa zvine hungwaru, bhodhoro sensor kuverenga, hapana bhodhoro pasina kuzadza, kupwanya chiratidzo dhizaini yega yega mudziyo.
Magetsi zvikamu zvinotora French Schneider, senge PLC, HMI, inverter uye kutyora. sanganisira pneumatic kutonga, kugadzikana zvakanyanya, chengetedzo, girini uye yakaderera kudyiwa.
Muchina unofukidzwa zvizere neSS304, yakanyorova musuo wegirazi, kuchinjika kuri nani kwenzvimbo dzakasiyana siyana, inorwisa-kukanganisa, uye yakachena yakachena.
Mapaipi anotsigira CIP / SIP
Pashure: Peritoneal Dialysis Solution (CAPD) Yekugadzira Line
Zvadaro: IV Infusion Girazi Bhodhoro Turnkey Project
Hemodialysis Solution Kugadzira Mutsetse 、 HD Dialysis mhinduro yekuzadza tambo
Ampoule Machine À Coudre Singer, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Muchina À Coudre Led,